Started this discussion. Last reply by SoeThi Jun 28, 2013. ကူညီပေးကြပါအုံး
Started this discussion. Last reply by REDCRANE Feb 27, 2013. facebook Account ကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
Started this discussion. Last reply by nandakyawswar1 Feb 22, 2013. View All
http://sogeeky.blogspot.sg/2006/07/how-to-audit-and-track-file-deletions.html"Jun 28, 2013Ko-AKM replied to nandakyawswar1's discussion သူငယ်ချင်းများကူညီပေးပါအုံး Server ထဲက Data ဖျက်သွားတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Source ကိုသိချင်လို့ပါ"install မလုပ်ခင်ကအချိန် က data ကတော့မရပါဘူး..ရှင်းပါတယ် ကြိုပီးကာကွယ်ထားရတာပါ..."Jun 28, 2013nandakyawswar1 replied to nandakyawswar1's discussion သူငယ်ချင်းများကူညီပေးပါအုံး Server ထဲက Data ဖျက်သွားတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Source ကိုသိချင်လို့ပါ"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို
ကျေးဇူးတင်လျှက်"Jun 26, 2013Ko-AKM replied to nandakyawswar1's discussion သူငယ်ချင်းများကူညီပေးပါအုံး Server ထဲက Data ဖျက်သွားတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Source ကိုသိချင်လို့ပါ"PA File site lite ဆိုတာရှိတယ်.. trial ကတော့ http://www.poweradmin.com/file-sight/lite.aspx ဒီမှာရပါတယ်..
ဘယ်သူဖျက်တယ်ဆိုတာလိမ်လို့မရပါဘူး..အချိန်အတိအကျ..IP user အကုန်ပေါ်ပါတယ်..windows audit logging ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်လုပ်တတ်မှ…"Jun 26, 2013nandakyawswar1 postedadiscussionသူငယ်ချင်းများကူညီပေးပါအုံး Server ထဲက Data ဖျက်သွားတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Source ကိုသိချင်လို့ပါရုံးက server 2008 မှာ server ထဲက Data အချို့ကို ဘယ်သူဖျက်သွားမှန်းမသိလို့ပါ ဘယ်ကွန်ပျူတာကနေ ဖျက်သွားသလဲဆိုတဲ့ Source ကို သိချင်လို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ရှာလို့ ရသလဲ ဘယ်ဆော့ဝဲလ်မျိုးသုံးလို့ရပါသလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးကြပါအုံးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်See MoreJun 25, 2013 4
REDCRANE replied to nandakyawswar1's discussion ကူညီပေးကြပါအုံး"အာနောက်တယ်... ဒါက $RECYCLE.BIN ဆိုတာ ..Windows က recycle bin ရဲ့  အကျွင်းအကျန်လေးပါ...Driver Letter တွေရဲ့ အောက်မှာ Hidden ဖော်လိုက်ရင် တွေ့နေကျအရာလေးပါ ..virus မဟုတ်ပါဘူး.."Feb 27, 2013Green leaf replied to nandakyawswar1's discussion ကူညီပေးကြပါအုံး"The $RECYCLE.BIN folder can bealegitimate folder. It's where the Recycle Bin files are stored until you clear the Recycle Bin. If you find the folder in locations other than the root of the drive, then it is likely to beasuspicious folder…"Feb 27, 2013lin lin replied to nandakyawswar1's discussion ကူညီပေးကြပါအုံး"kasper နဲ့မရရင် microsoft essential securtiy ကိုသုံးကြည့်ပါလား"Feb 27, 2013 More... RSS